किशोर नेपाल काठमाडाैं, २६ फागुन
प्रत्येक ५ वर्षमा चुनावद्वारा सरकार परिवर्तन गर्ने संसदीय प्रणालीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै भारतका सुप्रसिध्द समाजवादी चिन्तक डा. राम मनोहर लोहियाले भारतीय संसदमा भनेका थिए, ‘ज्यूँदो देशले ५ वर्षसम्म पर्खिन सक्दैन ।’
काम नगर्ने र कुरा मात्रै गर्ने सरकार हटाउन ५ वर्षको पर्खाइ जनताका परिवर्तनका आकाङ्क्षाहरूका लागि लामो हुन्छ । डा. लोहियाको यो भनाइ सरकारको सुस्त गतिका विरुद्ध लक्षित थियो । उनको आशय एक/एक वर्षमा सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्कै थिएन ।
हामी नेपालीले त परिवर्तनलाई पर्खेर पूरै ६० वर्ष बिताएका छौँ । हरेक १/२ वर्षको अन्तरालमा सरकार बदलिएका छन् । तैपनि विकास भएको छैन । पञ्चायत व्यवस्था बदलियो, राजाको निरङ्कुश शासन परास्त भयो ।
संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो । सर्वशक्तिमान सरकार बन्यो । त्यसले पनि केही गर्न सकेन । उल्टै मानिसको चिन्तन प्रक्रिया हिंसात्मक राजनीतितिर मोडियो ।
त्यसपछिको समयमा सबै कुरा बदलियो । राजा बदलिए, गणतन्त्र आयो । तर, नेपालको शासन पद्धतिमा, सरकारको काम गर्ने शैली र सोचमा कहिल्यै कुनै प्रकारको बदलाव आएन ।
जनताले आशा गरेका थिए, माओवादीको सरकार आएपछि धेरै कुरामा परिवर्तन आउनेछ । यी त नयाँ राजनीतिक शक्ति हुन्, रगत बगाएर, लडेर आएका छन् । पक्कै केही नयाँ विचार लिएर आएका होलान् ।
संविधानसभाको चुनावपछि माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को नेतृत्वमा वामपन्थीहरूको गठबन्धन सरकार बन्यो । केही समयपछि त्यो सरकार आफैँ परिबन्दमा पर्‍यो ।
सबभन्दा पछिल्लो समयमा माओवादीहरूको धोवीघाट आन्दोलनपछि, एसएमएसमार्फत गरिएका मत संकलनका आधारमा लोकप्रिय बनेका बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।
त्यो सरकारले केही न केही गर्ला भन्ने आशामा बाँचेका थिए नेपाली । त्यो आशा पनि काठमाडौंका सडकमा धुलो बनेर उड्यो ।
यतिबेला बाबुरामको सरकारले शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लगाउन र संविधान निर्माण गर्न ठूलो काम गरेको बताइँदै छ । तर, यो देशका जान्नेसुन्नेहरू कोही पनि मूर्ख छैनन् । छिमेकीहरूको दबाबमा काम गर्ने बानी परेको छ, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूमा ।
भनिरहनु पर्दैन, त्यो दबाब नपरेको भए प्रक्रियाहरू अहिलेसम्म पनि अलमलमा नै हुन्थे ।
नेपाल जलस्रोतमा धनी छ । कुनै विदेशी विशेषज्ञले एक दिन बिहानै भनिदियो, नेपाली हो, ब्यूँझ र खुसी होऊ । तिमीहरूको देशमा बगिरहेका नदी–नालामा पानीसँगै ८३ हजार मेगावाट बिजुली निरन्तर बगिरहेको छ ।
यति धेरै बिजुली हुने देश गरिब हुनै सक्दैन । विदेशीले अरू पनि थप केही भन्न खोजेको थियो, खुसीले रमाएका हामीले सुन्दै सुनेनौँ । त्यसैबेलादेखि अहिलेसम्म हामी रमाएको रमाएकै छौँ ।
संसारमा आएको जलवायु परिवर्तनले नेपालका नदी–नालामा बग्ने पानीको क्षमतामा कति अवमूल्यन भयो वा कति वृद्धि भयो ? त्यसको लेखाजोखा गरेका छैनौँ हामीले । हामीलाई देशको गौरव धान्दैमा, राष्ट्रियताको गीतापाठ गर्दैमा फुर्सद छैन ।
नदी–नाला देशका गौरव हुन र राष्ट्रियताका प्रतीक । यसको अपार क्षमताको सुरक्षा गर्दागर्दै गरिब जनताको जुनी बितिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नदी–नालाको वर्तमान क्षमताका बारे प्राविधिक अध्ययन कसले गर्ने ? जनताको तहमा यस्तो अध्ययन गर्ने क्षमता छैन, सरकारले पनि यसको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छैन ।
गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बनेपछि अनुत्पादक रूपमा रहेको जल–विद्युत सम्पदा जनताको हितमा जतिसक्यो छिटो प्रयोगमा ल्याइने आशा थियो जनताको । तर, दुई वर्षको यो अवधिमा एउटै पनि आयोजनाको शिलान्यास भएन ।
जलस्रोत कौवाका लागि पाकेको बेलबराबर भएको छ नेपाली जनताका लागि । नेपालका टाठाबाठाका लागि भने यही अनुत्पादक जल व्यक्तिगत सम्पत्ति बनेको छ । राजनीतिको बार्गेनिङ टेबुलमाथि कोशी कर्णालीको नक्सा फिँजाएर धेरै नेताहरूले वरत्र र परत्रसमेत सुधारिसकेका छन् ।
पहिले राजा र उनका भारदारहरू विदेशका जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूलाई यही जलशक्ति देखाएर पैसा कमाउँथे । संसदीयकालमा प्रजातन्त्रका नेताहरूले पनि त्यही भूमिका दोहोर्‍याए ।
गैरसरकारी संस्थाहरूको संरक्षकका रूपमा रहेको त्यतिबेलाको एमाले पार्टीले निहित स्वार्थ रक्षाका लागि विश्वबैंकको लगानीमा निर्माण हुन लागेको अरूण तेस्रो आयोजनामा रोक लगाएर नेपालमा अन्धकार युगलाई निरन्तरता दियो ।
त्यो अरूण अहिले भारत सरकारको कम्पनी सतलजले बनाउँदै छ । यसको चर्चा कुनै बेला गरौँला । अन्धकार युगको निरन्तरतापछि देशमा खुद्रे जलविद्युत आयोजनाको बाढी नै आयो । गणतन्त्रकालमा शासनमा स्थापित भएका माओवादीका एकथरी नेताले एमालेकै नीतिलाई निरन्तरता दिन खोजिरहे ।
अहिलेसम्म उत्पादनको चरणमा पुगिसक्नुपर्ने कतिपय जलविद्युत आयोजना तावाबाट खसेर भुङ्ग्रोमा परेको अवस्थामा छन् । केही वर्षअघि १४ प्रतिस्पर्धी कम्पनीमध्ये सबैभन्दा राम्रो भनेर छनाेटमा परेको भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अहिलेसम्म अपर कर्णाली आयोजना सुरू गर्न सकेकोे छैन ।
यसकाे अन्तर्निहित यथार्थ डरलाग्दो छ । त्यतिबेला यही आयोजनालाई लिएर माओवादीभित्र विवाद चर्किएको थियो । यसको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको थियो माओवादी ।
अपर कर्णाली वा अरू कुनै विद्युत् आयोजनाको कुरा कमिसनको भाउमा नै अड्किने गरेको छ । आफूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बताउने जलविशेषज्ञदेखि ऊर्जा विशेषज्ञसम्म सबै आ–आफनो भाउको खोजीमा राजनीतिक दलको आँगन चहारिरहेका भेटिन्छन् ।
ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमा भाउको जति महत्त्व हुन्छ, त्यो अरू कुनै आयोजनामा हुँदैन । त्यो भाउमा कुरा नमिलेसम्म राष्ट्रियता निरन्तर संकटमा परिरहन्छ ।
जनताले आधा पेट खाएर, फाटेका टालाले आङ छोपेर, आफ्ना बालबच्चाको भविष्यको धराप थापेर, जसरी भए पनि, नेताहरूका लागि राष्ट्रियताको रक्षा गरिदिइरहनुपर्छ ।
अपर कर्णालीका बारेमा पनि यही भइरहेको छ । जनता अपर कर्णाली आयोजना बन्नुपर्ने कुरामा सहमत छन् । बनाउने पक्ष पनि तयार छ । तैपनि, केही रचनात्मक हुन सकेको छैन । यो योजनाले जनताको जीवनस्तरमा ठूलो सुधार ल्याउनेछ । तर, जनताको आवाजको कुनै महत्त्व छैन ।
अहिले आएर सरकारबाट राष्ट्रिय गौरवकोे खिताब पाएको माथिल्लो तामाकोसी जल–विद्युत आयोजना संकटमा पारिएको छ । सम्पूर्ण नेपाली पुँजीबाट निर्माण भएको यो आयोजनाको लागत डब्बलभन्दा बढी भइसकेको छ । तैपनि आयोजना पूरा भएको छैन ।
आयोजनाका हाकिमहरू ९९ प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको दाबी गर्दछन् । तर, ऊर्जा उत्पादनका लागि आवश्यक पानीको प्रवाह गर्ने हाइहेड पेनस्टक पाइप नै जडान भएको छैन ।
यो यति संवेदनशील वस्तु हो, जसमा सबभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्दछ । पेनस्टक पाइप जडानको गति यति सुस्त छ कि काम समाप्त हुन १ वर्ष पनि लाग्न सक्छ । तामाकोसीमा कमिसनको चलखेल झन विकराल छ ।
देशको जेसुकै होस । देश गरिब नै भए पनि के भो र ? देशको राष्ट्रियता जोगाउन पार्टीहरू सक्षम छन् । नेताहरूको तर्क छ, विकास भनेको हुँदैगर्छ । अर्बाैं अर्ब रूपैयाँमा महँगो बिजुली किनेर पनि काठमाडौंमा झलमल्ल बत्ती बालिएकै छ भने यसलाई विकास नभने के भन्ने ?
वुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा यति मात्रै हो, देशमा ठूला आयोजना कार्यान्वयन नभएसम्म मानिसको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन आउन सक्दैन । अब यो काममा निर्णायक तहमा बसेका नेताहरू स्वच्छ भावनाका साथ 'मसक्क मस्किएर' लागेनन् भने परिवर्तन टिकाउ हुन सक्दैन ।
नयाँ संविधानको प्रतिरक्षाका लागि समानान्तरमा आर्थिक विकासका योजनाहरूको छिटो कार्यान्वयन हुन जरूरी छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २६, २०७६, ०१:०७:००